King Kong Cash | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! King Kong Cash | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
King Kong Cash bụ a oghere egwuregwu dabeere na isiokwu nke a gigantic ozodimgba na-achị oké ọhịa dị ka a eze. Ọtụtụ movies e mere na a mma anụ ọhịa ma e nwere nnọọ ole na ole egwuregwu dabeere na ya. na nke a ekwentị ịgba ụgwọ ohere mpere game, e nwere ise-esi anwụde na 20 paylines. The egwuregwu na-edoziri na backdrop nke a lush ọhịa na oké banana ọkpọ na a nkume oche-eze-eze Kong. Ọ na-anọ na a okpueze na isi ya na-ehi ụra ọtụtụ mgbe. E nwere mma jungle kwaa music ke ndabere nke na-na-adị gị n'ọrụ. Ị nwere ike nzọ na-amalite uru nke £ 0,20 na-ewu ya na £ 500 kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke King Kong Cash
Nke a magburu onwe ekwentị ịgba ụgwọ ohere mpere game e mepụtara site Blue Bipute. Ha na-a na-eduga online cha cha egwuregwu ngwọta na-eweta n'ụwa. Ha nwere a ọgaranya na ahụmahụ na nka na elu Ịgba Cha Cha teknụzụ ndị na-enyere ha ike egwuregwu playable on mobile ngwaọrụ dị ka nke ọma.
E nwere ụfọdụ ndị mara mma katuunu style akara na nke a na ekwentị ịgba ụgwọ ohere mpere game. E nwere agụ iyi, icheku, tiger na enyí ọhịa na-egwu egwuregwu ahụ logo ka elu-uru na akara. The logo na-akwụ ndị kasị elu na 500 mkpụrụ ego na ise akara landings. J, Q, K na A of ebre kaadị na-ala na udi akara. E nwere ihe abụọ bonus akara na-enyere gị aka imeri si ụfọdụ ndị ọzọ bonus atụmatụ. Ha bụ ihe nnọchianya nke eze Kong onwe ya tinyere a gbọmgbọm nke gold mkpụrụ ego.
Wild Symbol: The osisi gbọmgbọm nke gold mkpụrụ ego bụ anụ atụmatụ na ọ na-ekpuchi ihe niile ndị ọzọ na akara mmanya eze Kong. Ise nke anụ ọhịa akara na a payline na-enye gị a na-emeri ahụhụ ruo 500 ugboro kwa.
ụra na-atụ Kong: The eze Kong na-ehi ụra mgbe niile na nkume-ya oche-eze. Enweghị usoro n'oge egwuregwu, ọ kpọtere ruo tinye ụfọdụ bonus atụmatụ na oghere iji ya bazooka. Golden gbọmgbọm atụ ogho, banana wilds, bonus agbam ume na atụ ogho streak bụ bonuses ọ na-enye.
King Kong Gbasaanụ: The nnọchianya nke eze Kong bụ ikposa atụmatụ a ekwentị ịgba ụgwọ ohere mpere game. Atọ ma ọ bụ karịa nke a na akara n'oge a atụ ogho-akpali bonus larịị. I nwere ike imeri onye ọ bụla n'ime ihe anọ atụmatụ na ha gbọmgbọm gbawara, alaeze free spins, nzọ ụkwụ bonus na ọlaedo free spins.
Summary: Nke a bụ otu n'ime ole na ole ekwentị ịgba ụgwọ ohere mpere dabeere na a dike ozodimgba, eze Kong. Na uche ịfụ ndịna na bonus atụmatụ, ị nwere ike mfe na-atụ anya ime ka nnukwu ego site na njedebe nke ụbọchị.